Fitsipika momba ny tsiambaratelo | Zeevou
Zeevou dia anaran'ny varotra Zeevou Ltd. Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia hanazava ny fomba fampiasan'ny fikambanana anay ny angon-drakitra manokana angoninay avy aminao rehefa mampiasa ny tranokalanay ianao.
Inona avy ireo angona angoninay?
Ahoana no hanangonanay ny angon-drakitrao?
Ahoana no hampiasanay ny angon-drakitrao?
Ahoana no hitahirizanay ny angon-drakitrao?
Inona ny zonao fiarovana data?
Inona avy ireo mofomamy?
Ahoana ny fomba fampiasana cookies?
Inona avy ireo karazana cookies ampiasainay?
Ahoana ny fitantanana ny cookies-nao
Politikan'ny tsiambaratelo an'ny tranonkala hafa
Fiovana amin'ny politikantsika manokana Ahoana ny fifandraisanao aminay
Ahoana ny fomba hifandraisana amin'ireo manampahefana mifanaraka amin'izany
Zeevou manangona ireto angona manaraka ireto:
Laharana fisoratana anarana amin'ny fiara (toerana namandrihana anao)
Ny anaran'ny vahiny hafa (raha mihoatra ny 16 taona)
Fampahalalana hafa toa heverinay fa ilaina sy / na araka ny takiana ao amin'ny The Immigration (Hotel Records) Order 1972 na lalàna mifandraika amin'ny lalàna mifandraika amin'izany.
Ny mombamomba ny fanarahana ny vaovao nampitaina taminay tamin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny dokam-barotra na ny mpiara-miasa aminy.
Fampahalalana momba ny fanadihadiana momba ny fampiasanao ny serivisy sy ny fifandraisanao amin'ny interface an'ny serivisy
Manome anao an'i Zeevou mivantana ny ankamaroan'ny angona angoninay. Manangona angona sy manodina angona izahay rehefa:
Misoratra anarana an-tserasera na mametraka kaomandy amin'ny iray amin'ireo vokatra na serivisinay.
Fenoy an-tsitrapo ny fanadihadian'ny mpanjifa na omeo hevitra momba ny takelaka misy hafatra na amin'ny alàlan'ny mailaka.
Ampiasao na zahao ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny cookies-n'ny browser.
Ampiasao ny fampiharana finday anay.
Mifandraisa aminay amin'ny telefaona.
Zeevou dia mety hahazo ny datao ankolaka amin'ireto loharano manaraka ireto:
Mametraha kaomandy amin'ny alàlan'ny mpivarotra ireo vokatra na serivisy tantanana amin'ny alàlan'ny platforminay.
Ny dokam-barotra na ny fanondroana ireo mpiara-miasa rehefa tsindrio ny rohy iray mba hampidirina amin'ny tranokalanay na amin'ny finday.
Raha namandrika ny trano ho anao ny vady mpampiasa na antoko fahatelo hafa, azonay atao ny manangona ireo mombamomba anao etsy ambony (toy ny mpandraharaha misoratra anarana amin'ny anaranao) fa tsy aminao manokana.
Raha misy famandrihana ankolaka dia mety mbola mangataka aminao mivantana izahay hanamarina ny mombamomba anao manokana araka izay heverinay fa tokony hitahiry ny trano ho anao.
Zeevou manangona ny angonao mba hahafahanay:
Manome anao fanampiana, fikirakirana ny fitarainana ary mifandray aminao rehefa mino izahay fa ilaina izany
Alaharo ny kaomandinao ary tantano ny kaontinao.
Alefaso mailaka ianao miaraka amin'ny tolotra manokana amin'ny vokatra sy serivisy hafa heverinay fa tianao.
Fisorohana ny hosoka.
Ampio ireo mpanome tolotra na vokatra mitanisa amin'ny alàlan'i Zeevou hisorohana ny kaomandin'ny mpanjifa izay manohintohina ny orinasany.
Mizarà fampahalalana mifandraika amin'ireo antoko hafa mampiasa Zeevou hamenoana ny baikonao.
Fakafakao ny lamina sy ny fironana amin'ny baikonay.
Fampandehanana ny serivisy sy ny fanomezana ny endriny sy ny asany
Mandefa fampandrenesana, hafatra, fifandraisana ary fanambarana mifandraika amin'ny serivisy
Fanatsarana sy fanaingoana ny serivisy ary fampivoarana serivisy vaovao
Fanamafisana ny fepetra sy ity politika ity ary ny fisorohana ny fampiasana tsy ara-dalàna ny serivisy
Mankato ny lalàna mifandraika amin'izany ary manampy ireo masoivohon'ny mpampihatra lalàna sy tompon'andraikitra mahefa, raha mino izahay fa ilaina izany na ara-drariny; ary
Mandray andraikitra amin'ny tranga misy fifanolanana misy anao, amin'ny fanajana na mifandraika amin'ny serivisy
Manaova hetsika mivantana amin'ny varotra raha toa ka miorina ny tombony ara-drariny sy miaraka.
Manome anao antsipirihany momba ny atiny sy ny toerana amin'ny webinar na hetsika nosafidianao.
Valio ny 'Mifandraisa amiko' na endrika tranonkala hafa izay nofenoinao tao amin'ny iray amin'ireo tranonkalantsika Zeevou (oh: misintona whitepaper).
Araho ny fangatahana miditra (fanohanana ny mpanjifa, mailaka, chat, na antso an-telefaona).
Omeo fidirana sy serivisy mifandraika amin'ny fitsapana maimaimpoana ny fampiharana Zeevou ianao.
Omeo fidirana amin'ny vavahadin'ny Customer Support na ny tranokalanay.
Manaova adidin'ny fifanarahana toy ny fanamafisana ny baiko, ny antsipirian'ny lisansa, ny faktiora, ny fampahatsiahivana ary ny sisa. Ny fifanarahana dia mety miaraka amin'i Zeevou mivantana na amin'ny mpiara-miasa amin'i Zeevou.
Ampahafantarina anao ny fanelingelenana rehetra ataonay amin'ny serivisinay (hafatra momba ny rafitra).
Mifandraisa aminao mba hanao fanadihadiana momba ny hevitrao momba ny vokatra sy serivisinay.
Amin'ny fametrahana baiko dia manaiky ianao fa Zeevou dia afaka mizara ny angon-drakitrao amin'ireo orinasanay mpiara-miasa mba hahafahan'izy ireo manolotra anao ny vokatra sy serivisiny.
Mpanome serivisy na mpanatontosa vokatra voatanisa amin'ny alàlan'i Zeevou (raha mametraka kaomandy amin'izy ireo mivantana na anisan'ny baiko fonosana)
Mpiara-miasa amin'ny teknolojia izay ampiarahinay
Ny hafatra alefanao amin'ny mpampiasa hafa an'ny Serivisy dia halefa any amin'izy ireo
Azontsika atao ny mampiasa ny fampahalalana angoninay, araka ny voalaza etsy ambony, hanangonana vaovao tsy mitonona anarana na mitambatra. Azontsika atao ny mizara, mivarotra na mifampiresaka ary manome izany fampahalalana tsy mitonona anarana na mitambatra izany amin'ny antoko fahatelo, araka ny hevitray irery. Na izany aza, tsy hizara vaovao tsy fanahy iniana na fanahy iniana izahay, izay azo ampiasaina ara-dalàna hanambarana ny mombamomba anao tsy misy ny fanekenao.
Rehefa i Zeevou no manodina ny kaomandinao dia mety mandefa ny angon-drakitrao izy io, ary hampiasa ny mombamomba anao koa avy amin'ireo masoivohom-bola mpampindram-bola hisorohana ny fividianana hosoka.
Zeevou Tehirizo soa aman-tsara ao amin'ny Google Cloud Servers ny angonao.
Zeevou dia hitazona ny angon-drakitrao rehetra mandritra ny 5 taona aorian'ny teboka farany fisoratana anarana na fifanakalozana amin'ny pejinay na serivisy. Raha vantany vao tapitra io fe-potoana io dia hofafantsika ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo dian-dizitaly rehetra avy amin'ny angon-tserasera.
Zeevou te-handefa anao vaovao momba ny vokatra sy serivisinay izay heverinay fa tianao, ary koa ireo orinasanay mpiara-miasa aminay.
Raha nanaiky handray marketing ianao dia mety hiala foana amin'ny manaraka.
Manana ny zony amin'ny fotoana rehetra ianao hanakanana an'i Zeevou tsy hifandray aminao amin'ny tanjona ara-barotra.
Raha tsy te hifandray aminao intsony ianao ho an'ny tanjona marketing, azafady mailaka aminay info@zeevou.com.
Zeevou te-hahazo antoka fa mahafantatra tsara ny zonao rehetra fiarovana. Ny mpampiasa rehetra dia manan-jo hanana ireto manaraka ireto:
Ny zo hiditra - Manan-jo hangataka amin'i Zeevou ianao amin'ny kopian'ny datao manokana. Mety hampandoavinay vola kely ianao amin'ity serivisy ity.
Ny zon'ny fanitsiana - Manan-jo hangataka ianao Zeevou hanitsy izay vaovao inoanao fa tsy marina. Manan-jo hangataka amin'i Zeevou koa ianao hameno ny vaovao inoanao fa tsy feno.
Ny zo hamafana - Manan-jo hangataka ianao Zeevou hamafa ny datao manokana, amin'ny fepetra sasany.
Zon'ny famerana ny fikarakarana - Zonao ny mangataka ny hameperan'i Zeevou ny fikirakirana ny angon-drakitrao manokana, amin'ny fepetra sasany.
Ny zo hitsipaka ny fanodinana - Zonao ny manohitra ny fanodinan'i Zeevou ny mombamomba anao, amin'ny fepetra sasany.
Ny zon'ny mpiasa azo itokisana - Manan-jo hangataka ianao Zeevou hamindra ny angona nangoninay tamina fikambanana hafa, na mivantana aminao, amin'ny fepetra sasany.
Raha mangataka ianao dia manana iray volana izahay hamaly anao. Raha te hampiasa ny iray amin'ireo zonao ireo ianao dia mifandraisa aminay amin'ny mailaka: info@zeevou.com
Antsoy izahay amin'ny: +44 (0) 800 955 3 966
Na manorata aminay amin'ny: 1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey
Cookies dia rakitra an-tsoratra apetraka amin'ny solo-sainanao hanangonana fampahalalana momba ny log Internet sy ny mombamomba ny mpitsidika. Rehefa mitsidika ny tranonkalantsika ianao dia mety manangona vaovao avy aminao avy hatrany amin'ny alàlan'ny cookies na teknolojia mitovy amin'izany
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ny allaboutcookies.org.
Zeevou mampiasa cookies amin'ny fomba maro hanatsarana ny traikefanao amin'ny tranokalanay na amin'ny app misy anay, ao anatin'izany:
Ny fitazonana anao hiditra
Fahatakarana ny fampiasanao ny tranokalanay
Manara-maso ny fitsidihanao anay
Fantaro ny asanao an-tserasera raha toa ka manaraka ny antso an-telefaonao ianao
Misy karazana cookies maromaro, na izany aza, ny tranokalanay na ny rindranay dia mampiasa:
Functionality - Zeevou dia mampiasa ireto cookies ireto mba hahafantaranay anao amin'ny tranokalanay sy hahatsiarovanay ireo safidinao voafantina teo aloha. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny fiteny tianao sy ny toerana misy anao. Fangaro ny cookies avy amin'ny antoko voalohany sy antoko fahatelo no ampiasaina.
Doka - Zeevou dia mampiasa ireto cookies ireto mba hanangonana vaovao momba ny fitsidihanao ny tranokalanay, ny atiny nojerenao, ny rohy narahinao sy ny mombamomba anao momba ny tranokala, fitaovana ary adiresy IP anao. Zeevou indraindray mizara lafiny voafetra amin'ity data ity amin'ny antoko fahatelo ho an'ny tanjona dokam-barotra. Azontsika atao koa ny mizara angona an-tserasera voaangona amin'ny alàlan'ny cookies amin'ny mpiara-miasa aminay. Midika izany fa rehefa mitsidika tranonkala iray hafa ianao dia mety aseho dokam-barotra mifototra amin'ny lamina fitetezana ao amin'ny tranonkalantsika.
Ahoana ny fitantanana cookies
Azonao atao ny mametraka ny browser-nao mba tsy hanaiky cookies, ary ny tranokala etsy ambony dia milaza aminao ny fomba hanesorana ny cookies avy amin'ny tranokalanao. Na izany aza, amin'ny tranga vitsivitsy dia mety tsy hiasa vokatr'izany ny sasany amin'ireo tranokalanay.
Ny tranonkala Zeevou dia misy rohy mankamin'ny tranonkala hafa. Ny tranonkalantsika ihany no miantefa amin'ny politikantsika, ka raha tsindrio ny rohy mankany amin'ny tranokala hafa dia tokony hamaky ny politikany manokana izy ireo.
Zeevou mitazona ny politikany momba ny tsiambaratelo eo ambanin'ny famerenana matetika ary mametraka izay fanavaozana an'ity pejy web ity. Ity politika manokana ity dia nohavaozina farany tamin'ny 3 martsa 2019.
Raha manana fanontaniana momba ny politika momba ny tsiambaratelo i Zeevou ianao, ny angona tazoninay aminao, na te-hampiasa ny iray amin'ireo zonao hiarovana ny angona ianao, azafady aza misalasala mifandray aminay.
Mandefasa anay amin'ny: info@zeevou.com
Antsoy izahay: +44 (0) 800 955 3 966
Na manorata aminay amin'ny: 15 Sherbourne Close, Cambridge, UK CB4 1RT
Ahoana ny fomba hifandraisana amin'ny fahefana sahaza azy
Raha te hitory fitarainana ianao na raha mahatsapa fa tsy niresaka ny momba anao tamin'ny fomba nahafa-po i Zeevou dia azonao atao ny mifandraika amin'ny Biraon'ny Komisera misahana ny fampahalalana amin'ny alàlan'ny rohy etsy ambany.